Mogadishu Journal » Tiro dad ah oo lagu dilay weerar lagu qaaday gaari Bas ah iyo Al-Shabaab oo sheegatay
Mjournal :-Wararka ka imaanaya Gobolka Waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in illaa 10 ruux lagu dilay weerar lagu qaaday gaari Bas ah oo marayay deegaan ka tirsan Gobolka Wajeer.
Sida wararku sheegayaan weerarka oo dhacay caawa fiidkii ayaa la dabley hubeysan waxay gaari ku rasaaseeyeen inta u dhaxeysa Mandheera iyo deegaanka Kutulo oo ka tirsan Wajeer.
Taliyaha Booliska Wajeer Stephen Ng’etich ayaa xaqiijiyay in weerarka lagu qaaday gaariga baska ahaa, balse waxaa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo khasaaraha ka dhashay weerarkaas.
Hase ahaatee Xarakada Al-Shabaab ayaa war rasmi ah ka soo saartay weerarkaas, waxaana ay ku sheegtay inay ku dishay 10 qof oo Kenyan ah Kirishtaan ah.
Idaacada Andalus ee ku hadasha Afka Shabaab in xooggaga Al-Shabaab ee weerarka fuliyay ay kala saareen dadkii Baska saarnaa, lana sii daayay dhammaan wixii Muslim ahaa, lana dilay dadkii kale ee Kale ee Kenyaanka ahaa.
Al-Shabaab ayaa dhowr jeer oo hore sheegatay weeraro ka dhacay Gobolka Waqooyi Bari oo sidaan oo kale wadada loogu galay gaari bas ahaa, laguna dilay dad Kenyan ahaa.